Lahatsary: ​​Atiny mifanohitra amin'ny Backlinks | Martech Zone
Horonan-tsary: ​​Votoatiny mifanohitra Backlinks
Alahady Oktobra 26, 2008 Zoma, Oktobra 17, 2014 Douglas Karr
Betsaka ny olona no mandany sy mivarotra ny fotoanany amin'ny fanatsarana ny tranonkalany, ary manenjika ny lohany rehefa misy tranonkala hafa manana laharana lehibe kokoa nefa tsy voatsara. Satria ny fanatsarana ny atiny dia antsasaky ny ady fotsiny, ny fisarihana ny sain'ny tranonkala hafa izay tena manosika ny tranokalanao hikaroka ny valin'ny fikarohana. Ny asan'ny motera fikarohana dia ny manome valiny mifandraika amin'izany. Raha maro amin'ireo tranonkala hajaina be dia be no manondro anao ary miteny hoe: "ianao no tena izy!", Dia hitandrina bebe kokoa an'izany ireo Search Engine!
Tags: 3Aza kivyvalin'ny orinasaCAPTCHAteknolojia matokyfanateranalyrisFatra CPreCAPTCHA
Soso-kevitra momba ny atiny: ny filaharana manentana an'i Monroe
28 Okt 2008 amin'ny 12:08 PM
Heveriko fa tsara kokoa ho ahy ny atiny. Nanazava bebe kokoa momba izany aho, ny tanjon'ny bilaoginao dia ny fahazoana mpitsidika bebe kokoa. Noho izany dia tsy maintsy manome sy mandefa ny atiny misy ifandraisany izay liana amin'ny mpitsidika na ny mpijery ianao. Zava-dehibe ny fampahalalana ao amin'ny bilaoginao, arakaraka ny mahamety ny fampahalalana no tsara kokoa ary arakaraka ny habetsahan'ny tranonkala no hifandray aminao.
Ny refy dia tsy refesina ny tranokalanao izay tsara. Ny sasany amin'ireo tranonkala dia nifandray tamin'ny tranokala hafa, saingy mety hisy ny hakitroky ny pr ambany na ny naoty. Ny tranonkala sasany koa dia afaka mampiasa fifanakalozana rohy mainty.
Ireo mpitsidika dia mahita ireo fanavaozana farany na fampahalalana manan-danja. Ny ankamaroan'ny mpitsidika dia tsy niraharaha ireo tranonkala rehefa nanokatra ny rohy izy ireo tamin'ny alàlan'ny backlinked rehefa hitany fa tsy misy atiny mifandraika na manan-danja fotsiny fa ny spam fotsiny.